रगत शुद्धिकरणका लागि फाइदाजनक पाँच वटा खानेकुराहरु | Hamro Patro
अनि हाम्रै वरपर पाइने खानेकुराहरुको बारेमा बुझेर र मिलाएर खान सके रगत सफा हुन्छ र रोगबाट बच्न सक्छौँ । रगत शुद्धिकरणका लागि हामीलाई महँगो अथवा मार्टमा किनिएका खानेकुरा खान पर्दैन ।
पहिला यो पनि बुझौँ ।
शरीरमा भएको विषादी नहटी रगत शुद्धिकरण हुन सक्दैन । रगत सफा र शुद्ध राख्ने काम कलेजो र मिर्गौलाको भएका कारणले यिनीहरुलाई कसरी स्पूmर्त रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा विशेष ध्यान पु¥याउनपर्छ । रगत सफा राख्नका लागि रगतमा चिनी, धातु तथा शरीरमा शक्ति संचयमा सहयोग पु¥याउने लिपिडहरुको मात्राका साथै हेमोग्लोबिन तथा आइरनको मात्रा बेलाबखत जाँच गरिरहनपर्छ । अनि हाम्रै वरपर पाइने खानेकुराहरुको बारेमा बुझेर र मिलाएर खान सके रगत सफा हुन्छ र रोगबाट बच्न सक्छौँ । रगत शुद्धिकरणका लागि हामीलाई महँगो अथवा मार्टमा किनिएका खानेकुरा खान पर्दैन ।रगत बाक्लो भएर अथवा रगतमा विषादी धेरै भएर पनि अनेक रोगहरु लाग्ने गरेको हामीले सुनिआएकै छौँ । रोग नलाग्दै हाम्रै वरिपरि पाइने खानेकुरा मिलाएर खाँदा रोग लाग्दैन भने यस्ता खानेकुरा किन नखाने ? हाम्रो भान्सामा सजिलै आइपुग्ने र प्राकृतिक रुपमा रगत सफा गर्ने खानेकुराहरु यस प्रकार छन् ।
१. ताजा फलपूmल
हामीले खाने खानेकुरामा फलपूmल नभई हुँदैन । रेसा भएका अथवा फाइबर भएका फलपूmलले रगतमा रहेका विषादी हटाउने काम गर्छ । स्याउ, अम्बा, आरुबखडा, नासपातिजस्ता फलपूmलको बोक्रा नटाछी खाँदा यसले अझ बढी फाइदा गर्छ । यस्ता फलपूmलको बोक्रा टाछ्न किन हुन्न भन्ने प्रश्न हामीले हाम्रा बा–आमाहरुलाई पनि सोध्दै आउने गरेका छौँ । खासमा रगतमा हुने विषादी हटाउन र शरीरमा अनावश्यक रुपमा जमेको बोसो नष्ट गर्न पनि फलपूmलको बोक्रा तथा रेसाले सहयोग गर्दछ । सिजनमा पाइने अंगुर, स्ट्रबेरी, किम्बु, काफल, ऐंसेलुजस्ता फलपूmलले एन्टीअक्सिडेन्टको अथवा विषादी फाल्ने काम गर्दछ । साथै कलेजो स्वस्थ राख्न पनि मदत गर्छ । यसकारण हाम्रो खानामा फलपूmल छुटाउन हुन्न र बोक्रासँगै खान मिल्ने फलपूmलहरु बोक्रासहित नै खाँदा राम्रो हुन्छ तर सफासँग भने पखाल्नुपर्छ है ।
२. हरियो सागपात
हरियो सागपात भनेपछि मुख खुम्च्याउने हामीमध्ये कति जना छौँ ? तर रगत स्वस्थ र सफा राख्नका लागि भने हरियो सागपात नखाई हुन्न । रगत सफा राख्नेबाहेक यसमा भिटामिन ए, भिटमिन बि र आइरन पनि हुन्छ । रगतमा हुने हेमोग्लोबिनको मात्रा मिलाउनेदेखि लिएर रगतको कणमा रहेका हानिकारक तत्वहरु नष्ट गर्ने काम हरियो सागपातले गर्दछ । पानीको स्रोत वरिपरि वा पानीमै फल्ने सिमसाग वा खोलेसाग भनेर चिनिने सागहरुले कलेजोलाई फाइदा हुने काम गर्छ । चुरोट खाने व्यक्तिहरुमाथि गरिएको एक अध्ययनका अनुसार दिनको एक सय ७० ग्राम मात्र सिमसाग खाने गर्दा पनि पिसाबबाट धेरै विषादी निस्केर रगत शुद्धिकरण भएको पाइएको छ । यसकारण हरियो सागपात शारिरीक फाइदाको दृष्टिले धेरै नै महत्व बोकेको खानेकुरा हो ।
अन्नमा फाइबर धेरै हुने भएकाले पनि यी खानेकुराहरु रगतका लागि फाइदाजनक हुन्छन् । शरीरबाट अत्यधिक बोसो, रसायन तथा विषादी हटाउनका लागि अन्न लाभदायक मानिन्छ । यसले रगतमा हुने कोलेस्ट्रोल, ग्लुकोज घटाउने, आन्द्राको सफाइ गर्ने भएकाले पनि यसले कब्जियत भएकाहरुका लागि शरीरभित्रको फोहोर फाल्न सहयोग गर्दछ । अन्नमा हामी नेपालीहरुले प्राय खाने भनेको धान र गहुँ मात्रै हुने गर्दछ । यसबाहेक जौ, फापर, कोदो, ब्राउन राइसजस्ता खानेकुराहरु पनि अन्नहरु हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
रगत शुद्धिकरणका लागि बदाम पनि लाभदायक खानेकुरा हो । बदाममा फाइबर धेरै हुने भएकाले यसले कोलेस्ट्रोल र सुगरको मात्रा मिलाएर राख्ने काम गर्दछ । यसमा भिटामिन इ पनि अत्यधिक मात्रामा पाइने हुनाले रगत शुद्ध पार्नमा यसले मदत गर्छ । यसले कलेजोको लागि पनि फाइदा पु¥याउँछ । बदाम र ओखर खाने मानिसहरु यी खानेकुराहरु नखानेभन्दा स्वस्थ र रोगमुक्त हुन गरेको पाइएको छ । यसकारण रगत सफा राख्नका लागि बदाम खान सिकौं ।
सबैभन्दा सरल तर सबैभन्दा बढी प्रभावकारी विषादीविरुद्धको लडाइँ पानीले मात्र गर्न सक्छ । मिर्गौलाले शरीरको हानिकारक तत्व तथा फोहोरहरु मिर्गौलाको माध्यमबाट फाल्ने हुनाले धेरै पानी खाँदा शरीरको विषादी पिसाबबाट जान्छ । खानेकुराबाहेक पानी पनि रगत शुद्धिकरणका लागि अति नै आवश्यक पर्दछ । फाइबर भएका खानेकुरा जति खाए पनि मिर्गौलाले पानी पाएन भने शरीरको फोहोर बाहिर निकाल्न पाउँदैन । यसकारण दिनमा कम्तिमा पनि आठ गिलास पानी भने पिउनैपर्ने हुन्छ । आयुर्वेदका अनुसार तामाको भाँडामा पानी एक रात राखेर बिहान उठेर खाँदा अभैm बढी फाइदा हुन्छ । तामाको भाँडामा पानी राख्नाले यसले कलेजो चिसो बनाउने र पानीले शरीरको फोहोर बाहिर फाल्न मदत गर्दछ । यसकारण रगत सफा गर्नका लागि पनि धेरै पानी पिउने बानी बसालौँ ।
यसबाहेक पनि रगत शुद्धिकरणका लागि अन्य धेरै खानेकुराहरु खान सकिन्छ । जस्तैः बन्दा, काउली, ब्रोकाउली, निगालो, एभोकाडो, लसुन, बेसार, कागती, ओलिभको तेल, आदि जस्ता खानेकुराहरु पनि रगत सफा राख्नका लागि लाभदायक हुन्छन् । विश्वभर प्लाष्टिकमा बेरिएको खानेकुरा खाने गरेको बढ्दो चलनले रोग निम्त्याउने गरेको हामीलाई थाहा नै छ । मात्रा मिलाएर र सफा गरेर खान जाने नेपालीहरुले साधारणतय खाने गरेको खानेकुरा फाइदाजनक नै छन् । यसकारण यस्ता खानेकुरा बढी खाने गरौं र स्वस्थ होऔँ ।